Puntland oo sheegtay in dowladda Somaliya Aysan waxba ka quseyn Shidaal baarista deeganada Puntland+ COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Puntland oo sheegtay in dowladda Somaliya Aysan waxba ka quseyn Shidaal baarista deeganada Puntland+ COD
Maamulka Puntland, ayaa si cad u sheegay in Dowladda Federaalka Somaliya ee uu hogaamiyo Xassan Sheekh aysan kala tashaneynin Shidaal baarista deeganada Maamulka Puntland, xilli Dowladda Federaalka ay udigtay shirkada ku howlan arimaha Shidaal Baarista.
Ciise Maxamuud Faarax (Dhollowaa) Agaasimaha Macdanta iyo shidaalka Puntland oo Magaalada Boosaaso Warbaahinta kula hadlayay, ayaa tilmaamay in Puntland aysan cid kala tashaneyn in dhulkeeda ay ka baarto shidaal, sidoo kalena Dowladda Soomaaliya waxba aysan ka quseyn arintaasi.
Wuxuu kaloo sheegay in nasiib-daro ay tahay hadalkii kasoo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ahaa digniinta ku aadan Shirkadaha ku howlan Shidaal Baarista deeganada maamulkaasi.
Ciise Maxamuud Faarax (Dhollowaa) Agaasimaha Macdanta iyo shidaalka Puntland, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dhawaan deeganada maamulkaasi laga heli doono shidaal, maadaama hada meel wanaagsan ay mareyso baarista shidaalka.
Sidoo kale Agaasimaha wuxuu carabaabay in Shirkadaha ku sugan deeganada Maamulkaasi ay u fasaxan yihiin baarista Shidaalka deeganadaasi, maadaama Puntland ay u fasaxday arintaasi.
Puntland iyo Dowladda Federaalka ayaan wanaagsaneyn xiriirka ka dhaxeeyay, wixii ka dambeeyay markii Dowladda ay ku dhawaaqday Maamul usameynta Gobalada Dhexe ee dalka oo Puntland ay kasoo horjeesatay in Gobalka Mudug deeganadeeda lagu soo daro maamul usameynta Gobalada dhexe.
Deeganada Maamulka Puntland, ayaa hada waxaa ka socda howlo ku aadan Shidaal baaris ay wadaan Shirkado Ajaanib ah oo deeganadaasi ku sugan.